Qiso Jaceyl: “Waan Jeclaa, laakiinse daneyste ayuu noqday” (Dhacdo Murug Leh | shumis.net
Home » galmada » Qiso Jaceyl: “Waan Jeclaa, laakiinse daneyste ayuu noqday” (Dhacdo Murug Leh
Qiso Jaceyl: “Waan Jeclaa, laakiinse daneyste ayuu noqday” (Dhacdo Murug Leh
Akhristayaasha ku taxan Warbaahinta Caalamiga ah ee Gedo Times ayaa jeclaan laheyn inaan la wadaagno Fariin ay so odirtay Gabar Soomaaliyeed oo Magaceeda kusoo koobtay Anisa taasi oo qiso jaceyl xanuun badan ay soo martay inooga sheekeysay.
Aniso ayaa email usoo dirtay Wariye ka tirsan Gedo Times oo is yaqaaneen iyadoo Maamulka Sare ee Gedo Times ka codsatay in qormadaan jaceyl ee qabsatay ay baraha bulshada u so ogudbiyaan, qisadane sidaan ayey ku bilaabmeysaa.
Waxaan halkaan salaan qiimo iyo wanaag badan u marinayaa maamulka iyo shaqaalaha shabakadda Gedo Times, marka xigana waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan inta akhrisata qisadeydaan.
Aniga da’deedu 21 sano jir, waxaan ku noolahay magaalada Borama, waxaana weli ahay ardayad dhigata Jaamcadda. Qiso igu dhacday welina qalbiga iga danqisa ayaan go’aansaday in bulshada aan la wadaago, si ugu yaraan dhibaatada aan dareemayo igaga yaraato.
Waxaan muddo is garaneynay wiil aan jeclaysan in halkaan magaciisa kusoo qoro, waxaan ahayn dad jaceyl wadaag ah, laakiinse marka xaqiiqda laga hadlo aniga aad baan u jeclaa laakiinse dhankiiisa allah ayaa garan kara. Dad badan ayaa xitaa la yaabay heerka uu gaarsiisan yahay Jaceylka aan u hayo, noloshaydiina waxay ahayd mid aad iyo aad ugu faraxsan mar walbo oo aan la joogo ama aan maqlayo. Aniga waxaa i dhalay mid ka mid ah Ganacsatada ugu magaca dheer Borama, ama guud ahaan deegaannada Somaliland. Wiilkan aan jeclaa waxaan ogaaday in uusan igu soo raacin jaceyl laakiinse hantida waalidkey uu daneynayey.
Wax walbo oo uu magaalada ka jeclaado waan siin jiray, illeen nafteydii ayaa jeclayd hadana isagu ma ahayn mid dhaqaale haya ama reerkiisu wax u hayaan. Aniga oo taa eegaya ayaan maalin walbo nolosha meeshaasi ka fiirin jiray, balse waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah uu ninkii isbedalo.
Title: Qiso Jaceyl: “Waan Jeclaa, laakiinse daneyste ayuu noqday” (Dhacdo Murug Leh
Posted by Unknown, Published at March 16, 2017 and have 0 comments